महाशिवरात्री पर्वको महत्व र विशेषता – ज्योतिष शास्त्री राजेन्द्र खनाल USA – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar महाशिवरात्री पर्वको महत्व र विशेषता – ज्योतिष शास्त्री राजेन्द्र खनाल USA
शिवको अर्थ कल्याण हो । त्यसैले भगवान् शिव कल्याणका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, के विनाश वा संहार गर्ने पनि भगवान् हुन सक्छ ? कसैलाई वा कुनै वस्तुलाई नाश गरेर पनि कल्याण हुन्छ र ? संसार परमात्माको अस्तित्वले व्याप्त छ । भगवान् सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ । दिन रात, असल, खराब, कीट, मनुष्य, पशु, वनस्पति सबै भगवद्शक्तिकै परिणाम हुन् । त्यसैले, परमात्मा जीवनमा हुनुहुन्छ भने मृत्युमा पनि हुनुहुन्छ, सिर्जनामा हुनुहुन्छ र विनाशमा पनि हुनुहुन्छ । संसारमा मानिसको यदि जन्म मात्रै हुन्थ्यो र कसैको मृत्यु हुँदैनथ्यो भने के हुन्थ्यो होला ? बोटबाट समय पुगेका र पहेँला भएका पातहरू नझर्ने हो भने नयाँ पालुवाले कहिले र कहाँ स्थान पाउन सक्छन् ? नयाँको आगमनका लागि पनि पुराना र समय पुगेकाको विनाश वा समाप्ति अनिवार्य आवश्विनाश पनि एउटा विशुद्ध शक्ति हो । कुनै पनि कुरा समाप्त गर्न शक्ति चाहिन्छ, साहस र हिम्मत चाहिन्छ । संसारका सबै कामहरू विनाशक्ति सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यदि सबै क्रियाका लागि शक्तिको आवश्यकता हुन्छ भने संहारका लागि पनि शक्ति चाहिन्छ । त्यसैले, संहारशक्तिका रूपमा भगवान् शिव पूज्य र बन्दनीय हुनुभएको हो । भगवानका अगाडि सबै दोष, पीडा, भय, असुरक्षा, तनाव र विसङ्गतिहरू पनि कमजोर हुन्छन् । ती सम्पूर्ण नराम्रा शक्तिको प्रभावबाट मुक्त रहन सक्ने क्षमता भएर नै भगवान् शिव कल्याणका देवता मान्न सकिएको हो । ‘शरीरमा खरानी घसेर बस्नु अर्थात् शिवजस्तो हुनु भनेको सान्सारिक सुखबाट टाढा बस्नु भन्ने सन्देशलाई बुझ्न सकिन्छ ।
शिवरात्रीको पूजा फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिनमा स्नान गरी शुद्ध मनले निराहार बसी रातभर जागा बसेर भगवान महादेवको पूजा आराधना गरेमा सबै कार्य सिद्ध हुन्छ । भगवान शिव अत्यन्त दयालु देवता हुनुहुन्छ र उहाँ प्रसन्न भएमा आफुले इच्छाएको पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालमा यसलाई जुन तरिकाले मनाए पनि विदेशमा यसलाई महत्वपूर्ण ब्रत तथा पर्वका रुपमा लिन सकिन्छ ।सबैले यसलाई हर्षोल्लासका साथै ब्रतको रुपमा मनाऔँ ।
। नोटः यस वर्षको महाशिवरात्रीको दिन मार्च ४ तारिख, फाल्गुन 20 गते सोमवार परेको छ । जो जहाँ रहे पनि हामीले आफ्नो सँस्कार तथा चाडपर्वलाई आफू तथा आफ्नो परिवार, साथीभाइलाई चिनाऔं । सँस्कार नै तपाई हाम्रो चिनारी हो, राम्रो सँस्कारले नै हाम्रा बालबच्चाहरु पछि सफल हुन्छन् । सँस्कारको अनुशरण आफूबाटै सुरु गरौँ ।जसले गर्दा भोलि अरुले पनि थाहा पाउने छन् ।
(लेखक ज्योतिषी खनाल बिगत ११ वर्षदेखि वासिंटन डी सी, मेरिल्याण्ड, भर्जिनियाक्षेत्रमा ज्योतिष तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी पुरोहित काम गर्दै आईरहनु भएको छ ।सम्पर्क : 703-870-6480)